Holmsjönမှာအိမ် | Holmbygden.se
ကောင်းသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ nice အားလပ်ရက်အိမ်သူအိမ်သားတည်ရှိသည် 50 ရေချိုးအတူမီတာHolmsjön- နှင့် angle. အကြီးစားတောင်ဘက်-facing ဟင်းလင်းပြင်. အိုင်နှင့်သစ်တော၏အမြင်များ, သင်သည်သင်၏အိမ်တံခါးပေါ်တွင်ရှိ. အကြီးစားတွေအများကြီးမြက် coated မျက်နှာပြင်များ, မြက်ခင်း, ဥယျာဉ်တော်ပရိဘောဂ. ကလေးကဖော်ရွေ! ချေးဖို့လှေလှော်လှေရရှိနိုင်. ဘာဘီကျူးအဆောက်အဦကိုဆင်းHolmsjönမှာ. GSM နှင့် 3G ကွန်ရက်များပေါ်တွင်ကောင်းသောလွှမ်းခြုံရှိပါတယ်. အားလပ်ရက်သီတင်းပတ်အတွင်းရှေ့ဆက် mail နဲ့သတင်းစာတွေစေဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နွေရာသီ idyll မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်! ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူတစ်နှစ်လျှင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ဝေမျှဖို့လိုသေးငယ်တဲ့ hideaway. ဆောင်းဉီးရာသီ,အမဲရာသီ! ယုန်ကိုလိုက်ရှာဖို့ moose အမဲလိုက်ရာသီအတွင်းဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေကိုကျော်တစ်ဦးအခန်းငှားရမ်း. တချို့က option ကိုလည်းပိုရှည်ခြင်းနှင့်တိုတောင်းကာလအဘို့အမဲလိုက်မြေပြင်စီစဉ်ဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်.
Living ဧရိယာ: 60 m²
စြေး: 2000 / ရက်သတ္တပတ်
ဗိုက်ကင်း 261, 860 41 Liden
ထိတှေ့: Håkan Staaf 070-312 32 91, 0692-500 48
Sundsvallsbron är avstängd under natten på ... ဆက်ဖတ်ရန်